တကယျ့ ကို ဆုရ သတငျး ထောကျ ပီပီ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ကို တငျပွ သှား တာ (ရုပျ/သံဖိုငျ) – GaMone Media
Homepage / Local News / တကယျ့ ကို ဆုရ သတငျး ထောကျ ပီပီ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ကို တငျပွ သှား တာ (ရုပျ/သံဖိုငျ)
တကယျ့ ကို ဆုရ သတငျး ထောကျ ပီပီ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ကို တငျပွ သှား တာ (ရုပျ/သံဖိုငျ)
CNN က Clarrisa Ward က သူ့ ကို CNN က Exclusive interview လှမျးမေးတာ တကယျ့ကို ဆုရ သတငျးထောကျပိုငျရှငျပီပီ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကို တငျပွသှားတာ။ ဘာလို့ မွနျမာပွညျမှာ ရောကျနတောလဲ။ ဘာ အရေးကွီးကိစ်စရှိလို့လဲလို့ CNN သတငျး တငျဆကျသူက Clarrisa ကို စမေးပါတယျ။
Clarrisa – လှနျခဲ့တဲ့ ၂ လက ဒီမိုကရစေီ အရ ရှေးကောကျ တငျမွှောကျထားတဲ့ အစိုးရကို ဖယျရှား ပဈပွီး ရှကျဖို့ကောငျးလောကျအောငျ မဲရှူံးခဲ့ရတဲ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးလိုကျတယျ၊ ဒါကို မကနြေပျလို့ ဆန်ဒပွမှုတှေ မွနျမာတနိုငျငံလုံးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တယျ။ ဆန်ဒပွသူတှကေို အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးပွီး ပိုမိုဒေါသ ထှကျလာတဲ့အခါ ပိုဖွိုခှငျးလို့ လူတှရောနဲ့ခြီ အသတျခံရပွီး အသတျခံရတဲ့ ထဲမှာ ကလေးငယျတှေ ဒါဇငျ နဲ့ခြီပွီး ပါဝငျခဲ့တယျတဲ့၊ ဒါကို မွပွေငျမှာ ကိုယျတိုငျ သှားကွညျ့ပွီး သတငျးယူခငျြတယျတဲ့။ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးတညျးက ဘယျ နိုငျငံ တကာ သတငျးထောကျကိုမှ နိုငျငံထဲကို ပေးမဝငျခဲ့ဘူးတဲ့၊ သူကတော့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အကြိုးဆကျတှကေို ရငျဆိုငျပွီး မွပွေငျ မှာသတငျး ယူ ခငျြတယျ၊ အကွမျးဖကျမှုကို ဆနျ့ကငျြခငျြတယျတဲ့။
သတငျးကို လှတျလပျစှာ ယူခှငျ့ရရဲ့လား?
Clarrisa – ဟိုတယျ မှာလညျး နခှေငျ့မရဘူး။ စဈတပျက ထားတဲ့ နရောမှာပဲနရေတယျ။ သှားလရောမှာ စဈသားတှေ အပွညျ့ပါတဲ့ စဈကား ၆စီး ဝနျးရံထားတဲ့ အစောငျ့အရှောကျတှနေဲ့သှားရတယျ။ သူ့တို့ သတငျး အဖှဲ့ကို အလှတျမပေးဘဲ အမွဲစောငျ့ကွညျ့ခံထားရပွီး သူတို့ လှုပျ သ မြှ လိုကျကွညျ့နတေယျ။ သူနဲ့ စကား ပွောတယျ၊ သတငျး ယူတယျ ဆိုတာကအစ လိုကျကွညျ့နတေယျတဲ့။
CNN သတငျးတငျဆကျသူက Clarrisa ကို မငျးနဲ့ အမေး အဖွေ လုပျပွီး အဖမျး ခံရတဲ့ ပွညျသူတှေ အကွောငျးကို ပွောပါဦး။
Clarrisa – သူတို့ သတငျးအဖှဲ့ဟာ ပွညျသူတှနေဲ့ တှေ့ ခှငျ့မရဘူး။ လှုပျရှားတကျကွှ ဆန်ဒပွသူ activist တှေ နဲ့ တှခှေ့ငျ့မရဘူး။ သူတို့ တ နေ့ ဈေးထဲမှာ တှခှေ့ငျ့ရတာနဲ့ ပွညျသူတှကေ ရောကျလာပွီး Three fingers salute လကျသုံးခြောငျထောငျ အလေးပွုခွငျး တှပွေကွတ ယျ၊ သူတို့ စကားပွောခှငျ့ရတာနဲ့ လာပွီး သူတို့ ထိတျလနျ့ တုနျလှုပျနတေယျ၊ ဘယျလို ငွိမျးခမျြးမှုမရှိဘူး ဆိုတာတှကေို လာပွော ကွတယျတဲ့၊ သူတို့ အဲ့ဒီလို လာပွောပွီး သူတို့ဈေးထဲက ပွနျမထှကျသေးခငျမှာပဲ CNN နဲ့ စကားပွောခဲ့တဲ့သူ ၃ ယောကျကို ဖမျးသှားပွီ ဖွဈကွောငျး တုနျ နတေဲ့ အမြိုးသမီးတယောကျက အပွေးလိုကျလာပွီး သူ့ကို လာပွောတယျတဲ့။
အခုလို လှတျလပျစှာ ပွညျသူတှကေ ထုတျဖျောသတငျးပေးခှငျ့မရတာကို သူအတျော စိတျပကျြ မခငျြ့မရဲ ဖွဈနကွေောငျး သူ့အသံထဲမှာ ကွားနမွေငျနရေတယျ။ သတငျးဖွပေေးတဲ့သူတှေ အဖမျးခံရတဲ့ကိစ်စကို ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးနဲ့ အငျတာဗြူးမှာအဲ့ဒီသူတှကေ ဘာပွဈမှု ကြူးလှနျလို့ ဖမျးရတာလဲလို့ မေးတော့
ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျး – သတငျးဖွတေဲ့သူတှကေ ဘာရာဇဝတျမှုမှ မကြူးလှနျပါဘူး။ သူတို့ က ဈေးထဲမှာ ဆူပူအုံကွှမှုတှေ ဆန်ဒပွမှုတှေ ဖွဈအောငျ လှုံ့ဆျောမှာစိုးလို့ ဖမျးတာပါတဲ့၊ သူတို့ကို ပွနျလှတျပေးမှာပါတဲ့။
Clarrisa – သတငျးဖွပေေးတဲ့သူ ၁၁ ယောကျ အဖမျးခံရတဲ့ထဲက ၈ ယောကျပွနျလှတျပေး လိုကျပွီ ကွားလို့ စိတျသကျသာရာရပမေဲ့ ပွညျ သူတှကေ ကငျမရာရှမှေ့ာတောငျ သူတို့ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့နရေကွောငျး၊ ကောငျးမှနျတဲ့ အနာဂတျကို လိုလားကွောငျး၊ ဒီမိုကရစေီ ရရှိ လိုကွောငျးကို အဖမျးမခံရဘဲ ပွောခှငျ့မရှိကွောငျး၊ အဲ့ဒီလောကျတောငျ စဈတပျက ပွညျသူကို ခွိမျးခွောကျနကွေောငျး သူ့မှာ မခံမရပျနိုငျ ပွောပွသှားပါတယျ။
CNN သတငျးထောကျတှကေ ဒါဆို စဈတပျက CNN ကိုဘာလို့ မွနျမာပွညျကို လာပွီး သတငျးယူခှငျ့ပေးတာလဲ၊ တကယျလို့မြား မငျးနဲ့ အငျ တာဗြူးတဲ့သူတိုငျး ကို ဖမျးနမေယျ Clarrisa – စဈတပျက ကမ်ဘာကို ပုံပွငျဇာတျလမျးထှငျပွောပွခငျြတာက ဆန်ဒပွသူတှကေ ဘယျလို ကွမျးတမျးအကွမျးဖကျကွောငျး၊ အန်တရာယျရှိကွောငျး၊ စီးပှားရေးမတညျငွိမျမှုဖွဈစကွေောငျး ဇာတျလမျးတှေ ပွောပွခငျြတာတဲ့၊ ပွီးတော့ ဆန်ဒပွသူတှကေ ချေါဆောငျ ခွိမျးခွောကျပွီး သူတို့ကို ဘယျလို နှိမျခပြွောဆိုကွောငျး ဇာတျလမျးပွောပွသူတခြို့ကိုလညျး သူတို့နဲ့တှဆေုံ့စေ ခဲ့တယျတဲ့။
Clarrisa – နိုဝငျဘာလတုနျးက တရားဝငျ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ လုပျခဲ့ပွီးသားပဲ၊ အဲ့ဒီမှာ ဘကျမလိုကျသော အဖှဲ့အစညျးတှေ ကလညျး စောငျ့ကွညျသူတှရှေိခဲ့ကွတယျ၊ သူတို့ဆီက မဲကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး မဲလိမျညာမှုကို သံသယရှိတယျ ဆိုတဲ့ အသံ ဘာသံမှ မကွားခဲ့ရဘူး၊ အဲ့ဒါ ကို မှ စဈတပျက အတငျး မဲလိမျညာမှုရှိပါတယျ ဆိုပွီး အာဏာသိမျးခဲ့တယျ၊ ဒါကွောငျ့ စဈတပျက အခု ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလုပျပေးမယျ ပွော တော့ ဘယျသူမှ မယုံကွတော့ဘူး၊ ရာစုနှဈတဝကျကွာ စဈအစိုးရအောကျမှာဖိနှိပျခံထားရပွီးမှရလာတဲ့ လမျးတဝကျထိ ရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ ဆယျစုနှဈသာ ကွာသေးတဲ့လှတျလပျမှုဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးကို ပွညျသူတှကေ ဘယျသူမှ မစှနျ့လှတျခငျြ ကွဘူးတဲ့၊ လကျမလြှော့ခငျြ ကွ ဘူးတဲ့ အခုအခြိနျမှာ စဈတပျရဲ့ အာဏာပါဝါနရောကရော ဘယျနရောမှာရှိလဲ၊ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလုပျမယျဆို သူတို့ ဘယျလို အခွေ အနေ ရှိနိုငျလဲ လို့မေးတော့ တကယျ့မွပွေငျ အခွအေနမှော စဈတပျကို ပွညျသူတှထေဲက ထောကျခံသူမရှိဘူး၊ စဈလကျနကျနဲ့ စဈရေးအရသူတို့က ပွညျသူတှထေကျ အရေးသာနတေယျ။
သူတိုမှာ ဆနျးသဈတဲ့ လကျနကျတှနေဲ့ စဈအငျအားတှရှေိတယျ၊ စဈတပျမှာရှိတာနဲ့ ပွညျသူတှေ မှာ ရှိတာက စဈအငျအားအရရော၊ ငှေ ကွေး အရရော ဘယျလိုမှ ပမာဏနှိုငျးယှဉျလို့ကို မရနိုငျဘူး၊ သူတို့က အငျအားသုံးပွီး ဆန်ဒပွ ပွညျသူလူထုကို အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးနတေယျ၊ ဆ န်ဒပွ သူတှကေ ပိုပွီး ဒေါသကွီး ရနျလိုလာတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ပွခကျြနဲ့၊ ပိုပွီး အကွမျးဖကျ ရမျးကား လာတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ဆကျနှိမျနငျးနရေငျ သှေးခြောငျးစီး လူသတျပှဲကွီးတှေ ဆကျဖွဈနမှောကို ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ အားလုံးက စိုးရိမျနကွေရတယျ၊ ဒီလိုသာ ဆကျဖွဈ နရေငျ ဒီနိုငျငံဟာ ဘယျသူ ကမှ မွငျတှခေ့ငျြစရာမကောငျးတဲ့ ရကျစကျ ကွမျးကွုတျတဲ့ ဖိနှိပျဖွိုခှငျးမှုတှခေံရတဲ့ တကယျ့ လူထု ဆူပူ အုံကွှမှုကွီးဖွဈလာနိုငျတဲ့ အလားအလာရှိတယျ။CNN သတငျးတငျဆကျသူက CNN နဲ့ ကမ်ဘာက Clarrisa ကို မွနျမာပွညျမှာ ရှိခှငျ့ရ တာ အတှကျ ကံကောငျးပါ တယျတဲ့။ နိုငျငံတကာ ရဲ့ ပွတငျးပေါကျလေးအနေ နဲ့ မွနျမာပွညျမှာ ဘာတှေ တကယျဖွဈပကျြနလေဲ ဆိုတာ တှမွေ့ငျခှ ငျ့ရတယျတဲ့။
ဘာသာပွနျ ခရကျဒဈ – ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ
CNN က Clarrisa Ward က သူ့ ကို CNN က Exclusive interview လှမ်းမေးတာ တကယ့်ကို ဆုရ သတင်းထောက်ပိုင်ရှင်ပီပီ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကို တင်ပြသွားတာ။ ဘာလို့ မြန်မာပြည်မှာ ရောက်နေတာလဲ။ ဘာ အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့လဲလို့ CNN သတင်း တင်ဆက်သူက Clarrisa ကို စမေးပါတယ်။
Clarrisa – လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက ဒီမိုကရေစီ အရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရကို ဖယ်ရှား ပစ်ပြီး ရှက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင် မဲရှူံးခဲ့ရတဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်၊ ဒါကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြမှုတွေ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းပြီး ပိုမိုဒေါသ ထွက်လာတဲ့အခါ ပိုဖြိုခွင်းလို့ လူတွေရာနဲ့ချီ အသတ်ခံရပြီး အသတ်ခံရတဲ့ ထဲမှာ ကလေးငယ်တွေ ဒါဇင် နဲ့ချီပြီး ပါဝင်ခဲ့တယ်တဲ့၊ ဒါကို မြေပြင်မှာ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ပြီး သတင်းယူချင်တယ်တဲ့။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတည်းက ဘယ် နိုင်ငံ တကာ သတင်းထောက်ကိုမှ နိုင်ငံထဲကို ပေးမဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့၊ သူကတော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး မြေပြင် မှာသတင်း ယူ ချင်တယ်၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်ချင်တယ်တဲ့။
သတင်းကို လွတ်လပ်စွာ ယူခွင့်ရရဲ့လား?
Clarrisa – ဟိုတယ် မှာလည်း နေခွင့်မရဘူး။ စစ်တပ်က ထားတဲ့ နေရာမှာပဲနေရတယ်။ သွားလေရာမှာ စစ်သားတွေ အပြည့်ပါတဲ့ စစ်ကား ၆စီး ဝန်းရံထားတဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့သွားရတယ်။ သူ့တို့ သတင်း အဖွဲ့ကို အလွတ်မပေးဘဲ အမြဲစောင့်ကြည့်ခံထားရပြီး သူတို့ လှုပ် သ မျှ လိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူနဲ့ စကား ပြောတယ်၊ သတင်း ယူတယ် ဆိုတာကအစ လိုက်ကြည့်နေတယ်တဲ့။
CNN သတင်းတင်ဆက်သူက Clarrisa ကို မင်းနဲ့ အမေး အဖြေ လုပ်ပြီး အဖမ်း ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေ အကြောင်းကို ပြောပါဦး။
Clarrisa – သူတို့ သတင်းအဖွဲ့ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ ခွင့်မရဘူး။ လှုပ်ရှားတက်ကြွ ဆန္ဒပြသူ activist တွေ နဲ့ တွေ့ခွင့်မရဘူး။ သူတို့ တ နေ့ ဈေးထဲမှာ တွေ့ခွင့်ရတာနဲ့ ပြည်သူတွေက ရောက်လာပြီး Three fingers salute လက်သုံးချောင်ထောင် အလေးပြုခြင်း တွေပြကြတ ယ်၊ သူတို့ စကားပြောခွင့်ရတာနဲ့ လာပြီး သူတို့ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘူး ဆိုတာတွေကို လာပြော ကြတယ်တဲ့၊ သူတို့ အဲ့ဒီလို လာပြောပြီး သူတို့ဈေးထဲက ပြန်မထွက်သေးခင်မှာပဲ CNN နဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့သူ ၃ ယောက်ကို ဖမ်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း တုန် နေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က အပြေးလိုက်လာပြီး သူ့ကို လာပြောတယ်တဲ့။
အခုလို လွတ်လပ်စွာ ပြည်သူတွေက ထုတ်ဖော်သတင်းပေးခွင့်မရတာကို သူအတော် စိတ်ပျက် မချင့်မရဲ ဖြစ်နေကြောင်း သူ့အသံထဲမှာ ကြားနေမြင်နေရတယ်။ သတင်းဖြေပေးတဲ့သူတွေ အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စကို ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာအဲ့ဒီသူတွေက ဘာပြစ်မှု ကျူးလွန်လို့ ဖမ်းရတာလဲလို့ မေးတော့
ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း – သတင်းဖြေတဲ့သူတွေက ဘာရာဇဝတ်မှုမှ မကျူးလွန်ပါဘူး။ သူတို့ က ဈေးထဲမှာ ဆူပူအုံကြွမှုတွေ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှာစိုးလို့ ဖမ်းတာပါတဲ့၊ သူတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးမှာပါတဲ့။
Clarrisa – သတင်းဖြေပေးတဲ့သူ ၁၁ ယောက် အဖမ်းခံရတဲ့ထဲက ၈ ယောက်ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပြီ ကြားလို့ စိတ်သက်သာရာရပေမဲ့ ပြည် သူတွေက ကင်မရာရှေ့မှာတောင် သူတို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေရကြောင်း၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို လိုလားကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိ လိုကြောင်းကို အဖမ်းမခံရဘဲ ပြောခွင့်မရှိကြောင်း၊ အဲ့ဒီလောက်တောင် စစ်တပ်က ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း သူ့မှာ မခံမရပ်နိုင် ပြောပြသွားပါတယ်။
CNN သတင်းထောက်တွေက ဒါဆို စစ်တပ်က CNN ကိုဘာလို့ မြန်မာပြည်ကို လာပြီး သတင်းယူခွင့်ပေးတာလဲ၊ တကယ်လို့များ မင်းနဲ့ အင် တာဗျူးတဲ့သူတိုင်း ကို ဖမ်းနေမယ် Clarrisa – စစ်တပ်က ကမ္ဘာကို ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းထွင်ပြောပြချင်တာက ဆန္ဒပြသူတွေက ဘယ်လို ကြမ်းတမ်းအကြမ်းဖက်ကြောင်း၊ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွေ ပြောပြချင်တာတဲ့၊ ပြီးတော့ ဆန္ဒပြသူတွေက ခေါ်ဆောင် ခြိမ်းခြောက်ပြီး သူတို့ကို ဘယ်လို နှိမ်ချပြောဆိုကြောင်း ဇာတ်လမ်းပြောပြသူတချို့ကိုလည်း သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံစေ ခဲ့တယ်တဲ့။
Clarrisa – နိုဝင်ဘာလတုန်းက တရားဝင် ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ပြီးသားပဲ၊ အဲ့ဒီမှာ ဘက်မလိုက်သော အဖွဲ့အစည်းတွေ ကလည်း စောင့်ကြည်သူတွေရှိခဲ့ကြတယ်၊ သူတို့ဆီက မဲကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲလိမ်ညာမှုကို သံသယရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသံ ဘာသံမှ မကြားခဲ့ရဘူး၊ အဲ့ဒါ ကို မှ စစ်တပ်က အတင်း မဲလိမ်ညာမှုရှိပါတယ် ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် စစ်တပ်က အခု ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်ပေးမယ် ပြော တော့ ဘယ်သူမှ မယုံကြတော့ဘူး၊ ရာစုနှစ်တဝက်ကြာ စစ်အစိုးရအောက်မှာဖိနှိပ်ခံထားရပြီးမှရလာတဲ့ လမ်းတဝက်ထိ ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဆယ်စုနှစ်သာ ကြာသေးတဲ့လွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ပြည်သူတွေက ဘယ်သူမှ မစွန့်လွှတ်ချင် ကြဘူးတဲ့၊ လက်မလျှော့ချင် ကြ ဘူးတဲ့ အခုအချိန်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ အာဏာပါဝါနေရာကရော ဘယ်နေရာမှာရှိလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်မယ်ဆို သူတို့ ဘယ်လို အခြေ အနေ ရှိနိုင်လဲ လို့မေးတော့ တကယ့်မြေပြင် အခြေအနေမှာ စစ်တပ်ကို ပြည်သူတွေထဲက ထောက်ခံသူမရှိဘူး၊ စစ်လက်နက်နဲ့ စစ်ရေးအရသူတို့က ပြည်သူတွေထက် အရေးသာနေတယ်။
သူတိုမှာ ဆန်းသစ်တဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ စစ်အင်အားတွေရှိတယ်၊ စစ်တပ်မှာရှိတာနဲ့ ပြည်သူတွေ မှာ ရှိတာက စစ်အင်အားအရရော၊ ငွေ ကြေး အရရော ဘယ်လိုမှ ပမာဏနှိုင်းယှဉ်လို့ကို မရနိုင်ဘူး၊ သူတို့က အင်အားသုံးပြီး ဆန္ဒပြ ပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းနေတယ်၊ ဆ န္ဒပြ သူတွေက ပိုပြီး ဒေါသကြီး ရန်လိုလာတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြချက်နဲ့၊ ပိုပြီး အကြမ်းဖက် ရမ်းကား လာတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆက်နှိမ်နင်းနေရင် သွေးချောင်းစီး လူသတ်ပွဲကြီးတွေ ဆက်ဖြစ်နေမှာကို ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် အားလုံးက စိုးရိမ်နေကြရတယ်၊ ဒီလိုသာ ဆက်ဖြစ် နေရင် ဒီနိုင်ငံဟာ ဘယ်သူ ကမှ မြင်တွေ့ချင်စရာမကောင်းတဲ့ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းမှုတွေခံရတဲ့ တကယ့် လူထု ဆူပူ အုံကြွမှုကြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတယ်။CNN သတင်းတင်ဆက်သူက CNN နဲ့ ကမ္ဘာက Clarrisa ကို မြန်မာပြည်မှာ ရှိခွင့်ရ တာ အတွက် ကံကောင်းပါ တယ်တဲ့။ နိုင်ငံတကာ ရဲ့ ပြတင်းပေါက်လေးအနေ နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေလဲ ဆိုတာ တွေ့မြင်ခွ င့်ရတယ်တဲ့။
ဘာသာပြန် ခရက်ဒစ် – ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Previous post ဂပြနျနိုငျငံ၊ တိုကြိုမွို့ရှိ အိခဲဘုခု ရိုဘူတာ မှာ မွနျမာ နိုငျငံ အကွောငျး ရေးသားထားတဲ့ လကျကမျး စာစောငျ နဲ့ TISSUE တှေ လိုကျဝခေဲ့ကွတဲ့ လူငယျမြား
Next post ကဆြုံးသှားတဲ့ ခဈြသူ ကောငျလေး ကစားနေ ကြ ဂိုးတိုငျအောကျ မှာ ထိုငျပွီး အမှတျတရတှေ ကို ကွညျ့ကာ သတိရနရေတဲ့ ကောငျမလေး